नेपाल आज | आदित्यसँग नेहाको बिहे पक्का, फेब्रुअरी १४ मा कस्दैछन् लगनगाँठो!
आदित्यसँग नेहाको बिहे पक्का, फेब्रुअरी १४ मा कस्दैछन् लगनगाँठो!
एजेन्सी। चर्चित टेलिभिजन रियालिटी शो इन्डियन आइडल ११ ले यतिबेला निकै चर्चा बटुल्न सफल भएको छ । त्यस्तै यस शो मा होस्ट आदित्यनारायण झा र नेहा कक्करको मस्ती पनि दर्शकहरुले रुचाईरहेका छन । यसै शो मार्फत आदित्यले नेहालाई केहि दिनदेखि विवाहका लागि मनाउने कोसिस पनि गरिरहेका छन ।
शो मार्फत आदित्यले नेहालाई प्रेम प्रस्ताव समेत राखिसकेका छन । कहिले उनि नेहाका लागि रोमान्टिक गीत गाउछन त कहिले नेहालाई उठाएर रोमान्टिक गीतमा डान्स गर्छन । नेहाले पनि आदित्यको पागलपन्तीलाई स्वीकार गरेकी छिन । त्यस्तै आइतवारको एपिसोडमा भने आदित्य र नेहाको परिवारले विवाहका लागि मन्जुरी दिएका छन।
आइतबारको एपिसोडमा गायक उदित नारायण झा, गायिका अलका याग्निकसँगै दीपा नारायण झा पनि स्टेजमा पुगेका थिए । गीत र मस्तीसँगै उदितनारायणले नेहालाई जसरी पनि आदित्यसँग जसरी पनी विवाह गर्नुपर्छ भन्दै जिस्काएका थिए । उसो त नेहालाई उदित र दीपाले असाध्यै माया गर्ने गर्छन। हाँसी मजाकमा झैँ ट्विसत् दिन केहि बेरपछि स्टेजमा नेहाका बाबुआमा पनि पुगेका थिए। आदित्यलाई नेहाका माता पिताले पनि आशिर्वाद दिएका थिए। कुरोकानी मिलेसंगै आदित्यले नेहा र आफ्नो विवाहको तारिख २०२० फेब्रुवरी १४ लाई तोकेका छन।
इन्डियन आइडलका होस्ट आदित्य नारायण झा र नेहा कक्कर मिल्ने साथी हुन्। अक्सर यिनीहरु सानो पर्दामा खुब मस्ती गरिरहेका हुन्छन। यी दुईको रोमान्टिक कहानी शो लै थप रोमान्चक बनाउन रखिएको हो।
नेहा कक्कर आदित्य नारायण झा